Ravin-tsavoka Trenbolone Ravina (10161-35-8) hplc≥98% | AASraw
Trenbolone Enanthate vovoka
/ Products / Anabolika Steroids / Trenbolone poids Series / Trenbolone Enanthate poids
2.75 avy amin'ny 5	miankina amin'ny 4 mpanjifa naoty
SKU: 10161-35-8. Sokajy: Trenbolone poids Series, Anabolika Steroids
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny vokatra azo avy amin'ny gram ka hatramin'ny filamatry ny tranolay Trenbolone Enanthate (10161-35-8), eo ambany fifehezan'ny CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Trenbolone Enanthate video volo
Trenbolone enanthate karazana fototra
Meny fitetezana 382.544
Melt Point: 72-78 ℃
Color: Vovonam-bolamena mavo
Raw Trenbolone Enanthate ny fampiasana vinaingitra amin'ny tsindrona steroids
Trenbolone enanthate (nickname Trenabol), na trenbolone heptanoate, fantatra koa amin'ny hoe Tren E.
Raw Trenbolone Enanthate Usage Usage
Trenbolone enanthate dia matetika ampiasaina ho solika napetraka. Ny doka mahazatra indrindra amin'ny vondrona dia 75 amin'ny 100 mg.Ordinary Halalino azy indroa isan-kerinandro. Ny faharetan'ny fotoana tokony hampiasana dia amin'ny herinandro 8.
Fampitandremana momba ny vovon-tsolotsaina raozy Trenbolone
Misy fiantraikany vitsivitsy eo amin'ny kardia-vava, izay mety hisy fiantraikan'ny kolesterola, noho izany dia mitazona toetry ny fahasalamana, zava-dehibe tokoa ny fahazarana.
Ny olona ihany koa dia mila mandinika ny fiantraikan'ny androgen, toy ny fampitomboana ny herisetra, ny fahasosorana, ny akoho, ny mety ho fahasimban'ny lahy, ary ny hyperplasia tsara tarehy prostatika (fampitomboana ny prostaty)
Ao amin'ny vanim-potoana ivelan'ny vanim-potoana, ny ankabeazan'ny ankamaroan'ny testosterone sy ny Tren dia mahasoa mahavariana, ary azo atao koa ny manampy Anadrol na Dianabol. Ny hafa dia mahita ny fampiasana ny Nandrolone amin'ny fomba mahazatra amin'ny alalan'ny Tren mba hahasoa azy ireo indrindra. Na izany aza, ny fampiasana azy toy izany dia tsy voatery hotsaraina amin'ny fandrosoana maharitra. Amin'ny fizotrany, ny testosterone sy ny Tren dia afaka manaporofo fa tena mahasoa.
Row Trenbolone Enanthate Making powder
Ahoana no hividianana voly Trenbolone Enanthate avy AASraw
Trenbolone enanthate Raw Powder Recipes:
Ny zavatra rehetra momba ny Trenbolone Enanthate Powder
Ny toro-làlana farany: Ahoana no fomba fampiasana Recipe trenbololone mba hanamboarana menaka fanosotra tranbolona ao anaty solika 
William Llewellyn, Molecular Nutrition, Anabolics, Pejy 491 - 499, 618, 724, 2011.
Kickman, AT, Pharmacology of Steroids Anabolic, Journal of Pharmacology, PMC 2439524, Online, 2018.
Wilson, VS, Lambright, C., Ostby, J., Gray Jr, LE, In Vitro ary In vivo Effects of 17beta-Trenbolone: ​​Contaminant Effective Container, Toxicological Sciences, 2002.
Yarrow, JF, McCoy, SC, Borst, SE, Fitaovam-pahaizana momba ny tissue sy ny fampiasana kininina kininina amin'ny tranbolona: Steroide anabolic potentina miteraka endrojenika sy estrogenic activity, PubMed Publications, Online, 2010.
Ojasoo, Raynaud., Mpifanaraka steroid tokana ho an'ny fikarohana ara-tsiansa, fikarohana momba ny cancer, 1978.
Toeram-panafody tsy manam-pahaizana testosterone